Mika 1 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Ilizwi likaYehova elafika kuMika+ waseMoresheti, ngemihla kaYotam,+ ka-Ahazi,+ kaHezekiya,+ ookumkani bakwaYuda,+ awalibonayo ngokuphathelele iSamariya+ neYerusalem:+ 2 “Yivani nonke, nina zizwana; nikela ingqalelo, mhlaba nenzaliseko yakho,+ yaye iNkosi enguMongami uYehova mayibe lingqina+ nxamnye nani, uYehova esetempileni yakhe engcwele.+ 3 Kuba, khangela! uYehova uyaphuma endaweni yakhe,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuhla aze anyathele kwiindawo eziphakamileyo zomhlaba.+ 4 Iintaba zimele zinyibilike phantsi kwakhe,+ neentili ziya kwahluka phakathi, njengomthwebeba emlilweni,+ njengamanzi ephalazwe kwindawo engumnqantsa. 5 “Konke oku kungenxa yemvukelo kaYakobi, ngenxa kanye yezono zendlu kaSirayeli.+ Iyintoni na imvukelo kaYakobi? AsiyoSamariya na?+ Ziyintoni na zona iindawo eziphakamileyo zakwaYuda?+ AziyoYerusalem na? 6 Ngokuqinisekileyo iSamariya ndiya kuyenza imfumba yamanxuwa asendle,+ iindawo zokutyala izidiliya; kwaye amatye ayo ndiza kuwaphosa entlanjeni, neziseko zayo ndiya kuzityhila.+ 7 Yonke imifanekiso yayo eqingqiweyo iya kutyunyuzwa ibe ziingceba,+ nazo zonke izipho ezinikwe njengomvuzo wayo ziya kutshiswa emlilweni;+ nezithixo zayo zonke ndiya kuzenza inkangala ephanzileyo. Kuba yaziqokelela kwizinto ezanikelwa njengomvuzo kanongogo, kwaye ziya kubuyela kwinto eyanikelwa njengomvuzo kanongogo.”+ 8 Ngenxa yoku ndiza kwenza isijwili, ndibhomboloze;+ ndiza kuhamba ndinganxibanga+ nto ezinyaweni kwaye ndize. Ndiya kwenza isijwili njengoodyakalashe, ndizile njengeemazi zeenciniba. 9 Kuba umvumbo wayo awunakuphiliswa;+ kuba ufikelele nakwaYuda,+ isibetho sifikelele nasesangweni labantu bam, ukuya kufikelela eYerusalem.+ 10 “Musani ukukuxela oku eGati; ngokuqinisekileyo musani ukulila.+ “Zibhuqabhuqeni eluthulini endlwini ka-Afra.+ 11 Wena mmi olibhinqa waseShafire, dlula uhamba ze ngokuziintloni.+ Ummi olibhinqa waseTsanan akaphumanga. Isijwili saseBhete-etsele siya kuma phakathi kwenu. 12 Kuba ummi olibhinqa waseMaroti ulindele okulungileyo,+ kodwa kuye kwehla okubi kweza esangweni laseYerusalem kuvela kuYehova.+ 13 Bopha iqela lamahashe enqwelweni, wena mmi olibhinqa waseLakishe.+ Wayekukuqala kwesono kwintombi yaseZiyon,+ kuba kufumaneke kuwe imvukelo kaSirayeli.+ 14 Ngoko ke uya kunika iMoresheti-gati izipho zokwahlukana.+ Izindlu zaseAkezibhi+ zaziyinto enenkohliso kookumkani bakwaSirayeli. 15 Ndiya kuzisa umhluthi kuwe,+ mmi olibhinqa waseMareshaha.+ Uzuko lukaSirayeli luya kufikelela naseAdulam.+ 16 Yiba nempandla, uchebe iinwele zakho ngenxa yoonyana bakho boyolo olugqibeleleyo.+ Yenze banzi impandla yakho njengaleyo yokhozi, ngenxa yokuba bemkile kuwe basiwa ekuthinjweni.”+